Jesosy dia Zanak'Andriamanitra
→ Nanomboka nino ilay lehilahy sitrana fa Jesosy dia mihoatra ny mpaminany. Jesosy mihitsy no nilaza tamin'io lehilahy io fa Zanak'Andriamanitra izy.
Nanjary tiana ny tsy ilaina - fizarana 1
→ Taratasy Pentekotista Batista voalohany 149.
Miresaka mazava ny amin'ny Trinite ny Baiboly
→ Tsy azo diso fandray!
Tsy mandefa bitsika intsony i Donald Trump
→ Naato tamin'ny Twitter ny filoham-pirenena amerikana
Tarehimarika mamiratra amin'ny sary tamin'ny faramparan'ny taona 60
→ "Zavatra any an-danitra io!"
Rehefa tapaka aza ny haino aman-jery Kristiana - misy sisa afaka miteny momba izany?
→ Dia tonga izy ireo ka naka ahy; ary ankehitriny tsy nisy olona afaka niteny ho ahy.
Alohan'ny hiverenan'i Jesosy dia tsy maintsy mitranga izany
→ Afaka miverina ve i Jesosy amin'ny 2021?
Fihirana Krismasy sy ny fanantenana amin'ny fotoana korona
→ Jesosy manome antsika ho avy sy fanantenana.
→ Iray Andriamanitra ary Izy no Ray, Zanaka ary Fanahy Masina.
Ny programa Eo amin'ny seza eo aloha dia fahombiazan'ny mpijery
→ - Ity andiany ity dia tsy natao hisintonana olona hanaraka ny fantsona fa ho an'i Jesosy, hoy i Per Åkvist.
Fifidianana amerikana: mbola tsy nahalala zavatra ve ny haino aman-jery?
→ Tamin'ny fotoana farany, toy ny ankehitriny, ny media dia nandroaka an'i Trump ary diso. Izao dia isain'izy ireo indray izy ary diso ihany!
Fanafihana mpampihorohoro silamo amin'ny toerana enina any Viena
→ Betsaka ireo maty sy naratra no voalaza fa maty. Ny iray amin'ireo mpampihorohoro dia nanapoaka baomba namono tena koa.
Iza no mandresy?
→ Trump na Biden ve no mandresy anio hariva? Comment!
Ny maintin'ny fiainana maintso dia mandoro Baiboly
→ Ity ora ity dia tsy hanelingelina ihany fa koa faminaniana.
Tegnértornet any Gränna - fomba fijery tsy takatra!
→ Zahao ny fomba fijery ary henoy i Christer Åberg ny halehiben'ny hallelujah sy ny fanambarana haingana handray an'i Jesosy ary ho voavonjy!
Miaina amin'ny fanaintainan'ny fahaterahana fito isika izao
→ Raha ny tena izy, tsy mila fanambaràna intsony momba ny zavatra hitranga eto an-tany ankehitriny. Tsy misy olona mila miseho ho mpaminany ary milaza fa izany no hitranga. Jesosy dia efa naminany momba izany
Ny Testamenta Taloha dia milaza fa manan-janaka lahy Andriamanitra
→ "Avy tany Egypta no niantsoako ny zanako."
→ Amin'izao fotoana izao, ireo fiangonana sy fiangonana dia mandeha an-tserasera amin'ny fotoanan'ny corona, dia tsy tokony hivaona amin'ny hafatry ny famonjena momba an'i Jesoa Kristy izy ireo noho ny tsy voavonjy.
Voavonjy ve ianao raha manota?
→ Ny famonjena an'i Jesosy dia mamonjy, fa raha mbola manota ianao?
Ny boky faharoa misy ahy: The Unwanted
→ Ny tantara izay tena marina dia matanjaka sy poignant ary avelao tsy misy mandeha.
Tsy misy afa-tsy Knutby
→ Koa satria sahirana amin'ny tena izy isika, dia tsy mila hanome ny herintsika sy ny herintsika ho an'ny diso.
→ Ny kristiana ankehitriny no vondrona manenjika indrindra manerantany. Ny antony: mino an'i Jesosy ho Mpamonjy izao tontolo izao izy ireo
Ho tanteraka ve ny faminaniana 2007 momba an'i Donald Trump?
→ Faminaniana nanomboka ny 2007: Trump dia ho filoham-pirenena manompo - amin'ny lafiny roa!
Nividy enina ny mpitory kristiana
→ Nitranga ny volana novambra talohan'ny nahakarahan'ny mpampiasa azy izay nanapoaka azy ankehitriny ny fividianana firaisana.
666 ve ny vaksinin'ny corona?
→ Inona no lazain'ny Baiboly?
Ny fiakaran'i Jesosy dia manaporofo fa Andriamanitra
→ Ny Baiboly milaza fa Jesosy izay nakarina ho any an-danitra dia Andriamanitra!
Ilay horohorontany tany Kiruna dia famantarana iray?
→ Io no horohoron-tany lehibe indrindra voarakitra tany Suède.
→ Ao amin'ny Ezekiela toko faha-7, dia maminany amin'i Ezekiela ny Tompo ary miresaka ny fotoana maizina sy ny loza ho avy. Loza iray izay tsy manam-paharoa, ary irery amin'ny karazany.
Marary i Kim Jong-Un, mpitondra jadona any Korea Avaratra
→ Voalaza fa marary izy taorian'ny fandidiana.
Mandositra ny tany ny zavaboary eny an-habakabaka noho ny tsimokaretina corona
→ Ny teoria marimaritra iraisana maro no ao anaty vanim-potoana taorinan'ny areti-mifindra amin'ny corona.
Voavonjy amin'ny didim-pitsarana
→ Fa raha mbola maharitra eto an-tany ny fotoanan'ny fiangonana dia mihatra ny fahasoavana. Ankehitriny na iza na iza dia afaka manatona an'i Jesosy ka ho voavonjy!
Jereo fa ho avy izy!
→ Nefa jereo fa ny Tompon'ny fampakaram-badin'i Jesosy Kristy Tompontsika dia miandry antsika!
Toeran'ny otrikaretina Corona amin'ny lisitra famonoana
→ Aiza ny otrik'aretina corona amin'ny folo lisitry ny fahafatesana ambony indrindra amin'ity taona ity?
Faminaniana nataon'i David Wilkerson momba ny Corémé Pandemic 1986
→ Nahita pesta manaka izao tontolo izao aho. ary ny hidy, fiangonana sy ny governemanta dia nohidiana.
Ny zava-mahadomelina sy ny resa-betaveta hilalao onja mampitombo ny corona areti-mifindra
→ Ny NITOKANA TSY FIDINY miteraka fiantraikany lehibe eo amin'ny olona maro
Teo anelanelan'ny 100 000 sy 240 000 no maty tany Etazonia?
→ Fa Shina manana latsaka niharam-boina?
Isiraely dia mampiasa ny toro lalan'ny Baiboly mba hiarovana ny tenany hanohitra Coronavirus
→ Tsy misy firenena eto an-tany dia tonga manakaiky ny fepetra napetraky ny Isiraely mba hiarovana ny tenanao!
Ny fanaraha-maso ny Coronavirus Society lalana
→ Ao amin'ny lalan'ny Coronavirus isika mahita mazava tsara ny fomba fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso ara-baiboly no nanorina fiaraha-monina.
Ny mpitoriteny Rodney Howard-Browne azo sazy an-tranomaizina noho ny heloka bevava manohitra corona lalàna
→ Mety ho voaheloka hatramin'ny 60 andro an-tranomaizina sy lamandy $ 500.
→ 15000 ny olona voavonjy ao amin'ny fivoriana an-tserasera.
Corona: Alemaina Nazia ny olombelona dia nitsangana tamin'ny maty
→ Nisy ireo izay nino mafy fa Alemaina Nazia ny olombelona ho tsy niverina. Fa ankehitriny kosa, amin'izao fotoana corona mampiseho indray mandeha indray ny ratsy tarehy loha!
Mankanesa atỳ Jesosy indray
→ Inona no very, dia afaka handray indray. Hanatona an'i Jesosy ary mipetraka teo an-tongony.
→ 300 araka izay rehetra teny Jesosy tanteraka tonga voalohany, fa tsy ny rehetra tokony faminaniana momba ny fiverenany hitranga?
Naminany i Asterix tamin'ny 2017 ny Coronavirus?
→ Ao amin'ny boky tantara an-tsary Asterix sy ny lehibe amin'ny 2017 hazakazaka fantatra amin'ny anarana hoe iray amin'ireo mpifaninana ho an'ny Coronavirus.
National Day ny vavaka nambaran'ny Filoha Donald Trump
→ Ny antony dia ny hamonjy America avy ao amin'ny Corona otrik'aretina.
Corona: A maty - areti-mifindra - Large Collections voarara
→ Corona otrik'aretina ankehitriny sokajiana ho areti-mifindra, fanangonana ny voarara 500 mahery, izay midika fa hijaly koa ny fiangonana.
→ Allah dia tsy Andriamanitry ny Baiboly, dia nambara koa ao amin'ny fanekem-pinoana silamo.
Max of Sydow fahafatesana - nilalao an'i Jesosy in George Stevens olona avy any Nazareta
→ Ny sarimihetsika no lafo indrindra hatramin'izay sarimihetsika novokarin'ny baiboly.
Jesosy Atao hoe Tena Lehilahy
→ I Jesoa no tena lehilahy. Strong ny alalan 'ny fanetren-tenany sy ny fitiavany.
Ilay vehivavy janga lehibe an'i Harald Gustafsson
→ Izy io dia ny fiangonana lavo, izay vokatra eo amin'ny sary - Kristianisma sandoka.
Ny antony mahatonga ny ny Corona-tahotra Revealed
→ Ny governemanta notapatapahina Te-karama!
Corona mampihena ny fankamamiantsika lasantsy
→ Petrol dia 30 cents ny vidiny mora kokoa amin'izao fotoana izao.
Andriamanitra tsy misy didim-pitsarana dia mandefa
→ Kosa, dia naniraka an'i Jesosy sy ny Fanahy Masina ho antsika eto an-tany!
Corona otrik'aretina 'mety ho mahafaty dia tafahoatra
→ Ny ankamaroan'ny olona izay voan'ny hanana fahalemem soritr'aretina ny sery, tazo sy ny taovam-pisefoana soritr'aretina, ary sitrana haingana be.
Paging amin'ny Apg29
→ Misy mila fanampiana?
Corona otrik'aretina 'mety ho mahafaty
→ Ireo izay efa maty tao Shina dia efa eo ho eo amin'ny 79 taona taona.
Moa ve Andriamanitra na gazety dagen izany fanaraha-maso? - momba bönekonferensen firenena Nordic miantso raha mbola ao Solna
→ I mahazo pensive, rehefa miseho, fa sweeps kely ny tongotrao amin'ny zavatra rehetra teo aloha aho nieritreritra ny ho tononina toy ny hoe "avy amin'Andriamanitra."
→ Nisy olona nanontany raha ny alika, tsy misy, dia natao tamin'ny lamba maitso!
Ny mpikaroka avy amin'ny hafatra mahatalanjona Olona ny Fara Andro
→ Hitan'ny mpahay siansa ankehitriny ny tena loza mitatao ho olona an-tapitrisany eto an-tany.
→ Fa ny fanantenana izay mino an'i Jesosy dia be lavitra kokoa!
→ Moa ve ianao manaiky ho voafitaka sy voafitaka?
Hacker fikasana amin'ny Apg29
→ Misy miverimberina ny fanapahana ezaka amin'ny Apg29 ho SQL tsindrona.
Corona otrik'aretina: 252 no efa sitrana
→ Izay rehetra narary dia tsy ho faty!
"Ny fepetra no nanangonanao"
→ Ahoana no Andriamanitra, rehefa ny fepetra no nanangonanao tany Soeda?
→ Ny lalàna (ara-pivavahana / ny hafetsen'i) Hoy i - no. Hoy i Jesosy - Made.
Buddha ny fampianarana sy ny fivavahana tsy afaka mamonjy ny moanina bodista any Myanmar
→ "Lasa malemy kokoa sy malemy kokoa, nianjera tsy nahatsiaro tena ary nandao ny vatana sy ny maty."
Raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra
→ Maro ny olona ankehitriny velona amin'ny tsy fahalalana tanteraka ny momba an'Andriamanitra sy ny fiainana fa Izy tolotra.
Ny olona any amin'ny helo
→ Tohin'ny ka jereo ny tsara vita sarimihetsika momba an'i Jesosy 'tantara ny lehilahy manan-karena sy i Lazarosy. Ny tantara dia tsy misy fampitahana. Tena nahatsapa izany.
Tsy ara-baiboly ny vehivavy mpisorona
→ - Ary tsy ny olona na!
Inona no nitranga tamin'i Mosesy ny tena va izy?
→ Inona anefa no nitranga tamin'i Mosesy ny vatana dieny mbola tsy nalevina? Soratra Masina milaza na inona na inona momba azy io?
Holger Nilsson miresaka amin'ny Christer Åberg ny ady ny United States - Iran
→ Hisy ny ady lehibe fahatelo izao?
→ Eto dia afaka hiresaka momba ny zavatra rehetra atỳ ambanin'ny masoandro, na manoratra fotsiny antsika!
Raha te-hiresaka momba an'i Jesosy sy ny fomba mba ho voavonjy?
→ Izao no ataovy amin'ny Apg29 na manomboka ny famonjena ny bilaogy!
→ Ny US fanafihana balafomanga mety hitarika ho amin'ny ady lehibe iray any Afovoany Atsinanana, hoy Rouzbeh Parsi, manam-pahaizana amin'ny Afovoany Atsinanana ny UI.
Baiboly izay tokony hifidy?
→ KJV na ny King James Bible in soedoa?
No lazain'ny Baiboly fa tokony heny ny fitaovam-piadiana sy ny hanirina ny masonao, rehefa mivavaka isika?
→ Sa ny fomba mahazatra indrindra dia ny mangataka ny tsy araka ny Baiboly?
19 degre Janoary 2, 2020 any Norvezy
→ Fiakaran'ny mari-panan'ny no antony iray, araka ny mpikaroka.
Ahoana ny hevitrao momba ny Apg29?
→ Noho izany eto amin'ny andro farany, tiako ho fantatra ny hevitrao momba ny zavatra Apg29.nu?
Ny mpampihorohoro baomba tamin'ny 2019
→ 336 fanapoahana baomba tamin'ny 2019 tao Soeda. Firy amin'izy ireo no ataon'ny mpampihorohoro?
Ny fanenjehana ny Kristianina tany Nizeria
→ Ny antony fa ny Kristianina no enjehina any Nizeria ny Islamista ny fampahoriana.
-Paminaniana ho an'ny 2020: taona vitsivitsy farany - Gösta Karlsson
→ Faminaniana ny fampianarana ny Gösta Karlsson
Mobile - ny fotoana tompoko
→ Ary tonga ny fotoana mba hifantoka amin'ny aretina-pirenena vaovao.
Kristianina notapahin-doha tamin'ny andro Noely
→ Morden manaporofo indray mandeha indray fa ny Kristianina no enjehina indrindra vondrona.
Mahazo any an-danitra ianao raha mamono tena?
→ Norvejiana Princess Marta-Louise ny vadiny taloha Ari Behn fa Namono Tena ny tamin'ny taona 47.
Jesosy nahatanteraka ny lalàna
→ Moa ve isika mba hanatanterahana azy io?
Rahavavy Zipora sy Rachael ny fahitana ny fampakarana
→ "Nahoana ianao, nahoana ianao no tsy maika ny fitoriana ny filazantsara? Tsy hitanareo? Tsy misy fotoana bebe kokoa!"
→ Tandremo dalàna iray tam-po avy amin'ny olona, ​​izy ireo dia sandoka sy faminaniana sandoka.
Faminaniana: "Toy ny fifidianana eo amin'ny Isiraely izy, fa tsy misy governemanta miforona akaikin'ny 'ny fiavian' ny Mesia"
→ Inona no zava-misy ankehitriny ny amin'ny Isiraely.
→ Avy eo dia afaka manao izany eto.
→ Aza misalasala antsoy aho!
→ Aoka tsy hisy hamitaka anareo na amin'inona na amin'inona.
→ Ankehitriny dia te-hanambara ny ratsy indrindra aho, efa nandalo eo amin'ny lafiny fanerena avy amin'ny demonia hery.
Dia ho voavonjy
→ Rehefa manaiky an'i Jesosy ka mitranga ny fahagagana iray. Izany no ho voavonjy - Izany dia midika hoe voavonjy.
→ Antikristy dia fantatra amin'ny alalan'ny fandavana telo.
→ An-tapitrisany nitsidika ny fivoriana sy ny olona foana ny voavonjy.
Ebba Busch Thor maha samy hafa ny
→ Afaka tsy mitovy ny Kristianina?
→ Mazava tsara fa ny tahotra izay rehetra hita, sy ny tahotra dia iray ny mafy sy ny fahavalo?
→ Fahamasinana sy ny famonjena na ny fanamarinana, dia tsy toy izany koa.
→ "Tohina izahay!"
→ Dia mieritreritra ny taloha modely ao amin'i Kristy izay teo nandritra ny taona maro tany am-boalohany ho toy ny Kristianina. Ary nomeny ahy ny toro-hevitra sy ny fampiononana, fa koa nibedy.
Nahaterahan'i Jesosy - inona no fahagagana
→ Christer Åberg Miresaka momba ny nahaterahan'i Jesosy sy mihira sy milalao amin'ny 29 minitra.
Fanamarinana amin'ny fahasoavana amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy Kristy
→ Ny olona tsy afaka manao ny tenany ho marina.
amin'izao fotoana izao sexrubriker
→ Gazety Iza no manana sexrubriker izao?
→ Kiobà ny fitomboan'ny fiangonana!
→ Tokony ho hanamelohan'ny fahafatesana tsy ilaina?
Christer Åberg in Tannåker ny tapaky ny taona 90
→ Iza moa aho eo amin'ny sary?
Mivavaka amin'i Maria dia tsy araka ny Baiboly
→ Ny Eglizy Katolika malalaka dia malalaka eo amin'ny isam-ponina Maria ka noho izany dia lavitra koa ny zavatra lazain'ny Baiboly momba azy.
I Jesoa Kristy, ilay hany fanantenana, ny fahalavoan 'ny olona sy ny drafitry ny famonjena
→ Efa tamin'ny 1 Genesisy 3, isika dia mahita ny fomba ny drafitr'Andriamanitra manomboka maka endrika.
→ Matetika no lazaina amin'ny lava volo i Jesosy, fa izay no izy tena momba ny Baiboly?
→ Trump tasters narary tampoka rehefa avy voapoizina.
→ Izany no hany tanteraka horonantsary izay voarakitra ao amin'ny Baiboly toerana!
Didim-pitsarana na ny famindram-po Want?
→ Ny fahasoavana izay mamonjy tsy rariny.
→ Nanana an'Andriamanitra teo fa henjehina izahay, avy eo dia ho angamba fa tsy mba toy izany ny 1 Timoty 2: 2.
→ Ho hitanao ny valiny mahavariana!
Ankizy boky momba ny yoga
→ Yoga Mila sekoly sy akanin-jaza.
Ny fahamarinan'i Kristy avy ho anao
→ Henoy eto! Amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesoa Kristy marina isika.
→ SET dia miorina amin'ny encryption, nomerika sy nomerika sonia fanamarinana (mifanaraka amin'ny tapaka sonia karatra fividianana).
Ny finoana ny voan-tsinapy
→ Ahoana no ahafahantsika mandray anjara amin'ny finoana bebe kokoa, lehibe sy matanjaka kokoa ny finoana?
→ KJV izao manana ny vohikala: bibelonline.se
→ Ary ny sasany amin'ny fanehoan-kevitra netiquette tao amin'ny Apg29
→ Ao amin'ny Baiboly, maro ny biby.
Amin'izao fotoana izao dia misy izao tontolo izao lehibe indrindra ny fifohazana
→ Isaky ny andro, tokony ho 780 000 ny olona ho amin'ny finoana an'i Jesoa!
Famerenana: Tsy misy andriamani-kafa
→ Christer Åberg famerenana Per-Arne Imsens boky malaza Tsy misy andriamani-kafa.
→ Ny fanazavana ara-baiboly dia paminaniana / ny Fanahy Masina nandrara mafy ao am-pontsika, "tokony" gurgle sy ny volo eo amin'ny loha hitsangana.
Ilay tranobe, izay mety ho Rava
→ Na manan-karena ny olona iray tena "manana" izy kely fotsiny fadiranovana toerana fitahirizana ao amin'ny rafitra solosaina.
Ny Pentekotista teo aloha pastora Michael Karlendal hiala ny Fiangonana Katolika
→ Tsy miova fo izy noho ny faharesen-dahatra ara-baiboly, fa noho ny antony ara-tantara. Efa izany no tokony ho fampitandremana mitodika jiro mena.
Ny Clerk: Halloween no fety lehibe indrindra
→ Ny fahafatesana "andro firavoravoana", izay tena misy fiantraikany eo ny ankizy.
→ Toy ny tamin'i Enoka. "Tsy nahita azy intsony izy." Izy fotsiny Tsy hita popòka.
Will 2036 i Jesosy?
→ Fa raha tena ho avy i Jesosy niverina tamin'ny 2036 dia toy izany no tsy maintsy mitranga ara-Baiboly fampakarana 2029th
→ Garabola te "afa-tsy ny rivo-piainana" ny ankizy rehetra mba hihinana zavamaniry.
Ny Fivoriambe no hakarina ho eny amin'ny rahona hitsena an'i Jesosy eny amin'ny habakabaka
→ Milaza ny Baiboly fa tokony hakarina ho eny amin'ny rahona. Mariho fa tsy mitsangana. Ny tari-dalana dia toy izany no izy.
Join ny bönekedjan
→ Tamin'ity herinandro ity dia takiana mpivavaka!
Fanamelohana ho faty ho an'ny olona mitovy nefa mifanambady dia araka ny Soratra Masina
→ Manao izany izy ny amin'ny finoana kristianina. Fa mazava ho azy tanteraka izany tsy araka ny Baiboly.
I Abou Bakr al-Baghdadi ny fahafatesan'i - lasa izany dia tonga ratsy izao?
→ Horohoro mpitarika ny atao izao dia efa natao maty noho ny fanafihana Etazonia. Al-Baghdadi dia PhD amin'ny tantaran'ny silamo ny famonoan-tena niteraka akanjo lava namono ny tenany sy ny zanany telo.
→ Kristianina tsirairay dia tokony hahita an'i Jerosalema avy amin'ny fomba fijery ara-paminaniana.
Milaza ny Baiboly fa tokony hanaiky an'i Jesosy
→ Rehetra amin'ireo andininy ireo no mampiseho fa tokony hanaiky an'i Jesosy!
→ Ny toerana dia firenena any an-danitra, isika eo amin 'ny toe-tsaina dia afaka hita eto amin'ny lavitra.
Doctors fandraketana ny fanasitranana 'i Jesoa
→ Efa nanangona tahirin-kevitra maro ny fanasitranana amin'ny alalan'ny dokotera izay tsara fikarohana izany rehetra izany!
→ Aza mino fa vahiny tonga ka nitondra anay. Tsy marina izany.
Aza manome tsiny izao tontolo izao raha toa tsy te-hitory momba an'i Jesosy
→ Izany no asa Kristianina hitory ny Evanjely amin'izao tontolo izao - fa tsy izao tontolo izao!
→ Apg29 Mampiasa cookies.
→ Ny hoe olom-pirenena any an-danitra dia zavatra mahafinaritra.
Hall ny voarara avy amin'ny YouTube
→ Mpitandrina mpivady Stefan sy Mary Hallman dia voarara amin'ny YouTube.
Dia noforonina izao rehetra izao noho ny teny
→ Izy ireo tsy miraharaha ny zava-misy fa amin'ny fotoana rehetra ny olona izay nanampo fa ny tany boribory. Na dia ny Baiboly dia miresaka ny manodidina ny tany!
→ Israely tafaverina amin'ny maha-firenena sy ny Jiosy nanangona niverina ho any amin'ny tany.
Hiverenan'i Jesosy alohan'ny fahoriana
→ Any amin'ny Fisandratana, i Jesosy dia tonga ny fiangonana rehefa tonga any amin'ny faran'ny ny fahoriana, tonga niaraka tamin'ny fiangonana.
Ny Mpiandry Tsara ao amin'ny firenena Close
→ Izany no tena mampalahelo indrindra dia izao: ahoana no mety ve izy hiala MPIANDRY?
→ Efa ao amin'ny toko voalohany izay miresaka momba ny fototry Paoly fampianaran 'ny Fanahy Masina na ny Antenimieram-fibebahana, araka izay milaza tamin'izany andro izany inona no ho ny fiangonana fanantenana sy fiandrasana, izany hoe ny fivere
Ny finoana fisaka etỳ an-tany araka ny Soratra Masina
→ Ny filazana fa ny fiangonana any Moyen-Âge nino fa fisaka ny tany dia lainga avy amin'ny evolisiona
Praiminisitra Etiopiana Ahmed Abiy, mpivavaka tsara, Kristianina, loka Nobel fandriampahalemana 2019
→ Praiminisitra Etiopiana Ahmed Abiy handray ny Loka Nobel 2019 ho fanatrarana tamin'ny fiadanana sy voavaha ny mifanohitra amin'ny mpifanolo-bodirindrina Eritrea.
→ Trolls te-misakana ny olona tsy ho voavonjy Ary toy izany koa no tokony hiandry azy ireo na oviana na oviana.
Halloween - indray alina feno demonia
→ Zava-misy momba ny Halloween. Halloween na inona na inona mihoatra noho ny taloha fanaon'ny mpanompo sampy mba tsy ho manao, kely indrindra amin'ny Kristianina rehetra. Fahafatesana sy ny loza no omem-boninahitra.
Ny rafitra banky soedoa
→ Ampahany telo ao amin'ny boky The cashless teti-dratsy nataon'i Cash ihany.
→ Ny gazety Ny andro izany ny mahafinaritra ny mpitandrina izay mamaky ny telefaonina raha mbola nivavaka izy.
Miantso anao Jesosy
→ Christer velona Åberg ny fandaharana 29 minitra avy ao an-trano Studio in Meadow
Ny Isiraely - ny fotoana lehibe toetra
→ Moa ve isika manana ny fahatakarana ny lehibe indrindra amin'ny fotoana rehetra, mpandray anjara - ny Isiraely?
→ Tadidiko izy nilaza hoe: " 'ny Fanahy batisa mba hahazoana hery."
Kontantlöshetens "tranainy" ary ny voalohany tantara
→ Avy amin'ny boky The cashless teti-dratsy. Ao amin'ny heviny maoderina, ny hevitra nitsangana fividianana cashless-bahoaka tamin'ny 1949.
Dingana fito eo amin'ilay lalana ny finoana
→ Ny dingana voalohany amin'ny lalan'ny finoana.
Ny cashless tsikombakomba - TENY MIALOHA
→ Mpampiasa vola madinika aseho toy ny zazakely izay tsy mahalala ny tsara.
→ Efa mpamaky iray mailaka nalefa ho any amiko amin'izay itoerako Manontany tena ny mpanoratra na ny 16 taona, mafana fo momba ny tontolo iainana Greta Thunberg Ny antikristy.
Mifantoha i Jesosy
→ Izay mandresy amin'ny fitoriana momba ny politika ara-tsosialy, Agenda 2030 sy ny toetrandro?
→ Ny famorana tsy afaka hiteraka anareo indray, fa mety ho i Jesosy Kristy.
→ Ireo izay maty ao amin'i Kristy no tonga avy any am-pasana any ny anjomara. Izy ireo no mba mampiova ny endriny amintsika velona.
Malle Lindberg no mameno 90 taona
→ Jereo ny sary sy horonan-tsary tsy manam-paharoa amin'ny Malle Lindberg!
Izy indray mihazona ny Antikristy
→ Inona moa no mihazona indray ny antikristy, ka dia tsy mipoitra eo amin'ny sehatra izao tontolo izao, mandra-pahatongan'ny fotoana marina?
→ Izany no iray amin'ireo tena te hahalala an'Andriamanitra Mitarika, tahaka ny hatramin'izay ny alalan '.
→ Indray andro, nahatsapa aho fa ny Tompo dia tena nitsangana sy nandresy ny Kalvary.
Omeo Soeda i Jesosy
Jesosy - olombelona mpiantoka
→ Jesosy nitsangana teo niantoka iray manontolo ny maha-olombelona.
→ Ny izao tontolo izao ny Kristianina izay mila fo ireo dia mandoro sy ny fitaratra izay maneho an'i Jesoa Kristy.
→ Misy ady ara-panahy ho an'ny tany, teo anelanelan'ny Kristianisma sy ny finoana silamo.
Arne Weise efa maty
→ Swedenborg Mpampionona sy ny mysfarbrorn avy Donald Gana ny Noely Eva no maty.
Jesosy no hany Mpamonjy
→ Christer Åberg fampitàna mivantana ny 29 minitra.
Vehivavy any Holandy natao raikitra amin'ny euthanasie
→ Ary ny dokotera tany amin'ny fitsarana, ary nanandrana madiodio ny applåders tehaka ao amin'ny efi-pitsarana.
Raha te-hitory an'i Jesosy tamin'ny Apg29?
→ Alefaso ny fijoroanao ho vavolombelona, ​​voasoratra, lahatsary na feo rakitra.
→ Christer velona Åberg ny fandaharana 29 minitra ao izay mihira, mahay mitendry ny ukelele sy niresaka momba an'i Jesosy.
→ Christer Åberg dia miresaka momba ny fampitàna mivantana ny fomba Fanahy lasa Christening
→ "Raha ny Isiraely ny Famonoana Tambabe efa tsy tanteraka izany."
Ny efitra lamba dia fanekena ny finoana silamo
→ Ny efitra lamba sy ny fitafiana izy ireo mijoro ho vavolombelona fa ny silamo.
Rahoviana i Jesosy? - Holger Nilsson
→ Holger Nilsson manolotra ny boky vaovao "Rahoviana i Jesosy?" ary ny lahateny momba ny foto-kevitra.
David Wilkerson momba ny finoana hetsika
→ "A pasitera nanao hoe: Efa lasa lavitra toy izany, indray andro, evanjelista hitsangana ka manao hoe: Efa nandray ny fanambarana avy amin'ny Tompo, tonga ny fotoana hanombohana nanompo Maria. Izany dia mandeha ny fotoana izay."
Ve ny Kristianina tsy counterweight ny ratsy eo amin'ny fiaraha-monina?
→ Ny manam-pahefana no voatery hanakatona ny fonja, ary na dia Riva fonja, ny olona no namorona Jesosy nanova ny fiainany.
Natao batisa àry aho
→ Christer Åberg miresaka momba ny fomba izany rehefa natao batisa
→ Fanamasinana dia ny ho tonga bebe kokoa tahaka an'i Jesoa!
Breziliana Filoha Bolsonaro te handrara ny lahy sy ny vavy foto-kevitra any an-tsekoly
→ Sekoly tokony hiarovana ireo ankizy avy amin'ny lahy sy ny vavy foto-kevitra, manoratra ny Filohan'ny Brezila Jair Bolsonaro ao amin'ny Twitter.
→ Stefan Hallman ny boky mahagaga!
Fanombohana vaovao ho an'ny Apg29
→ Rehefa nandeha ny fotoana ho an'ny faha-18 taonan'ny I manomboka tanteraka teo amin'ny toerana malaza!
V 04, torsdag 28 januari 2021 kl 15:47